ကိုဗစ်က တကယ်ပဲဝတဲ့လူတွေမှာပိုဆိုးလား? -
ငါတော့ ဝလာပြီ … ပြဿနာပဲ !!!
” ကိုဗစ်က တကယ်ပဲဝတဲ့လူတွေမှာပိုဆိုးလား? “ဆိုတဲ့ ပုစ္ဆာကို အောက်မှာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်…
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းက လူကြီးလူငယ်အရွယ်မရွေးရဲ့ ဇီဝိန်ကို တကယ်ပဲရင်နာစရာကောင်းအောင်ချွေခဲ့ပါပြီ။ ပိုပြီးရင်နာရတာက အရွယ်ကောင်းလူငယ်တွေပါ ဖိတ်စင်ခဲ့တာပါ။ ဒီထဲမှာမှ အားလုံးလည်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ လူကြီးလူငယ်မရွေးအဝလွန်တဲ့လူတွေမှာ ရောဂါပြင်းထန်တာ၊ သေဆုံးနှုန်းပိုမြင့်တာတွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာလုပ်ထားတဲ့လေ့လာမှုတွေအရလည်း အဝလွန်တဲ့လူတွေ BMI ( Body Mass Index ) များတဲ့လူတွေမှာ ရောဂါပိုဆိုးတာတွေ့ရပါတယ်။
ဝတဲ့လူတွေ ( BMI 25kg/m2 ထက်များတဲ့လူတွေ ) မှာ သာမာန်ထက်ကိုယ်ခံအားပိုနည်းတတ်တဲ့အတွက် ရောဂါဒဏ်ကိုပိုခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါအပြင့်ဆေးရုံတက်ရနှုန်းမြင့်တာ၊ သွေးခဲမှုနှုန်းပိုများတာ၊ ကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တာ ပိုများပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာလုပ်ထားတဲ့လေ့လာမှုအရလည်း BMI 30kg/m2 အထက်ရှိတဲ့လူတွေမှာ သေဆုံးမှုနှုန်း 48% လောက်ထိပိုများတာတွေ့ရပါတယ်။
ဝတာဟာ ပြောရမယ်ဆိုကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပိုများတာ အားလုံးအသိပါ။ သွေးတိုး၊ဆီးချို၊နှလုံးစတဲ့ရောဂါတွေအကုန်လုံးနဲ့လည်း စပ်ဆက်နေတဲ့အတွက် ကိုဗစ်က အဝလွန်တဲ့လူတွေမှာပိုဆိုးတာပါ။ ပြောရမယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရဲ့အရာပါ။ ဒါဖြင့်ဘာလို့များ ပုံမှန်အလေးချိန်ရောက်အောင်မကြိုးစားနိုင်ရမှာလဲ? အစားအသောက်မျှတအောင်ပုံမှန်စားတာ၊ အားကစားပုံမှန်လုပ်တာ စသည်ဖြင့်ပုံမှန်အလေးချိန်ရအောင်ထိန်းပါ။ ကိုဗစ်သာမက အခြားရောဂါတွေရဲ့ ဖြစ်ပွားနှုန်း၊ပြင်းထန်နှုန်းတွေကို အများကြီးလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်တာကို ပေါင်ချိန်တစ်ခုတည်းမကြည့်ပဲ အရပ်နဲ့ပါပြန်ချိန်ပြီး Body Mass Index ဆိုတာနဲ့တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို Kilogram နဲ့တွက်ပါ။ အရပ်ကို Meter ပြောင်းပြီး နှစ်ခါမြှောက်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို(kg) ကိုတည်ပြီး အရပ်နှစ်ခါမြှောက်ထားတဲ့ meter square နဲ့ စားရပါမယ်။ အောက်မှာတော့WHO ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ BMI အဖြေတွေပြထားပါတယ်။
< 18.5 = ပုံမှန်အောက်
18.5 – < 24.9 kg/m2 = ပုံမှန်အလေးချိန်
25 – < 29.9 kg/m2 = ဝ
30 – < 34.9 kg/m2 = အဝလွန် အဆင့်တစ်
35 kg/m2 = အဝလွန်အဆင့်နှစ်
မိမိ BMI ကိုမိမိပြန်တွက်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင်ရော ဘယ်အထဲမှာပါပါသလဲ? BMI များနေပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အလေးချိန်ရောက်အောင် ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ကြိုးစားသွားဖို့ ဒီစာလေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှကိုဗစ်သာမက အခြားရောဂါတွေရန်ကပါကင်းဝေးနိုင်မှာပါ။
Ref: WHO, CDC , the lancet, sciencemag
Oct 26, 2021 Covid 19, Health Tips